“Raharaha sambo Flying”: tantsambo sinoa 2 namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena | NewsMada
Par Taratra sur 15/11/2019
Fanamafisana ny didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ihany no navoakan’ny fitsarana ambony, nitsara ny “Raharaha sambo Flying”, tao Toamasina, ny alarobia teo. Fa ankoatra izay, namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena koa ny tantsambo sinoa roa lahy, fantatra fa tafatsoaka any ivelany.
Namoahan’ny fitsarana ambony ao Toamasina didy fampisamborana iraisam-pirenena i Hu Jing Yun sy i Liu Yan Zhong, tantsambo sinoa tamin’ilay “Raharaha sambo Flying”. Naman’ireo tantsambo sinoa miisa 17 tratra niaraka tamin’ity sambo ity taty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara izy ireo. Naratra ary notsaboina tao amin’ny hopitalin’i Sambava izy ireto kanefa tafatsoaka any ivelany. Nankatoavin’ny fitsarana ambony ao Toamasina ny fangatahana onitra notakin’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny DLC na ny Direction de la législation et de contentieux, mitentina 2 miliara Ar izay aloan’ny orinasa mitantana ny sambo Flying.
Telo ny fiampangana ireto tantsambo sinoa ireto sy ny sambo Flying: fidirana an-keriny taty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara, fandavana ny fampijanonana nataon’ny mpitandro filaminana ary fikasana handositra sy tsy namaly ny antso nataon’ny mpitandro filaminana sy ny APMF ao Sainte Marie sy ao Maroantsetra ary ny famonoana ny milina rehetra ahafahana miserasera. Dimy taona an-tranomaizina sy onitra 10 tapitrisa Ar ny sazy azon’izy ireto noho ny fidirana an-tsokosoko ny sisin-dranomasina malagasy. Roa taona an-tranomasina sy onitra 5 hetsy Ar isaky ny ekipazy kosa noho ny fikasana handositra.
Sambo indroa niova anarana…
Araka ny fanazavan’ny talen’ny DLC, Ratiarison Donnat, efa mpiditra an-tsokosoko aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara ny sambo Flying. Min Feng ny anarany ny taona 2014 – 2017 ary niova ho Flying ny taona 2018 ka nitondra ny “pavillon Panaméen” sy ny laharana OMI 9 163 051 noraisina tao Singpour, ny 7 oktobra 2018, ary niainga tao izay tsy fantatra anton-dia ary tratra taty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara, ny 24 oktobra 2018. Nifindra tao amin’ny helodranon’Antogila manamorona an’i Mananara Avaratra ry zalahy, ny 31 oktobra 2018, ary nifindra tao amin’ny faritr’Ifaho ao amin’ny ranomasin’Anjonozana. Ny 5 novambra 2018, niditra ny faritra mena fanondranana an-tsokosoko andramena avy ao Cap Masoala. Nohamafisin’ity solontenan’ny fitondram-panjakana ity fa ny 2 novambra 2018, efa narahin’ny “commandement des force navales” na Cofona ny fizotrany rehetra ary niafara tamin’ny famindran-toerana ny “remorque” avy ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina izany, hanao ny fisamborana azy ireo ka niteraka fifampitifirana mihitsy.